Supply Chain ရဲ့မှေးရာပါ စီးဆငျးမှု လေးခု - Logistics Guide
Supply Chain ရဲ့နားလညျဖို့လိုအပျတဲ့ မှေးရာပါစီးဆငျးမှုလေးခုဟာ
၁. ကုနျပစ်စညျးစီးဆငျးမှု (Material flow)
၂. သတငျးအခကျြအလကျစီးဆငျးမှု (Information Flow)
၃.ငှကွေေးစီးဆငျမှု (Finance Flow)
၄. ကုနျသှယျစီးဆငျးမှု( Commercial Flow)တို့ ဖွဈပါတော့တယျ။
ကုနျကွမျးကနေ ကုနျခြောအထိ ထုတျလုပျခွငျး၊သယျယူပိုဆောငျခွငျး လုပျငနျးစဉျအဆငျ့ဆငျ့ဖွဈပါတယျ၊
Supply Chain အားလုံးမှာ သတငျးအခကျြအလကျတှကေရှိပွီး သုံးလညျးသုံးနကွေတာဖွဈပါတယျ၊ Supply Chain တလြှောကျမှာ အမြိုးမြိုးသော သတငျးအခကျြအလကျတှကေ ရှိနမှောဖွဈပါတယျ ၊ Demand Information Flow ၊ Forecsating Information Flow ၊ Production and Scheduling Information Flow ၊ Design and NPI Information flow ဆိုပွီးရှိပါတယျ ။ Information Flow က ထုတျလုပျသူနှငျ့ စားသုံးသူဘကျသို့ နှဈဘကျစီးဆငျးလြှကျရှိပါတယျ ၊
ဒီအခကျြက Supply Chian မှာ အရေးကွီးဆုံးပဲဖွဈပါတယျ ၊ ဝယျယူသူစားသုံးသူ (Customer)တှဟော မိမိဝယျယူထားတဲ့ကုနျပစ်စညျးဘယျရောကျနပွေီလဲဆိုတာကို အသိခငျြဆုံးပါပဲ ၊ ယခုနောကျပိုငျးမှာဆို Tracking System အနနေဲ့ ပစ်စညျးတငျမျောတျောယာဉျမြားကို GPS Systemမြား တပျဆငျခြိတျဆကျကာ ကုနျပစ်စညျးရှလြေ့ားမှုမြားကို Customer ကိုယျတိုငျ သိရှိနိုငျပွီး စီမံနိုငျနပွေီဖွဈပါသညျ၊
ငှကွေေးစီးဆငျမှုကလညျး Supply Chian ရဲ့ Blood Stream လိုတောငျတငျစားချေါဝျေါနကွေပီဖွဈပါတယျ၊ Supplier ဘကျက ကုနျသှယျစီးဆငျးမှု (material Flow )ရှိ သလို Customerဘကျက ငှကွေေးစီးဆငျမှု(Finance Flow)ကလညျး ရှိနမှောဖွဈပါတယျ ။ တခြို့ က Money Flowလို ချေါကွပွနျပါသေးတယျ၊
၄.ကုနျသှယျစီးဆငျးမှု( Commercial Flow)
Supply Chain တဈခုလုံးတှငျ စီးပှားဖွဈ ကုနျသှယျ စီးဆငျးမှုရှိပါတယျ ၊ကုနျပစ်စညျးစီးဆငျးမှုတဈလြှောကျတှငျ ကုမ်ပဏီတဈခုမှ တဈခု သို့ Supplier မှ Buyer သို့ စီးဆငျမှုမြားဖွဈပွီး ဒီဖွဈစဉျတှဟော ရောငျးခွငျးနှငျ့ ဝယျခွငျးမှ Supplier မှ Buyerဆိုပွီး နောကျဆုံး end Consumerသို့ ပွောငျးလဲခဲ့ပါပွီ။ Commercial flowက ကုမ်ပဏီတဈခုထကျပို့ရပါမယျ။ကုမ်ပဏီတဈခုထဲမှာ ကုနျပစ်စညျးစီးဆငျးမှုရှိပွီး owner မပွောငျးရငျ Commercial flowမဟူတျပါဘူး
အဓိကကတော့ Information flowပါ information flowက Both Direction စီးဆငျးပါတယျ ၊ Up streamရော Dowm streamဘကျရော စီးဆငျးရပါမယျ။
ဒါပငျမဲ့ မှနျကနျသော informationဖွဈဖိုရာ လိုပါတယျ။
IMSလိုချေါဆိုနတေဲ့ Information Management Systemတှဟော တိုးတကျလာပငျမဲ့..information Shareလုပျတဲ့သူတှကေ မှနျကနျတိကတြဲ့ information နှငျ့ Direction က တိကဖြို့လိုပါတယျ။လုပျငနျးခှငျအမြားစုမှာတော့ Information Flowကတော့ အဆငျပွသေလိုတှေ စီးဆငျးနပေါတော့တယျ
Supply Chain ရဲ့မွေးရာပါ စီးဆင်းမှု လေးခု
Supply Chain ရဲ့နားလည်ဖို့လိုအပ်တဲ့ မွေးရာပါစီးဆင်းမှုလေးခုဟာ
၁. ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှု (Material flow)
၂. သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု (Information Flow)
၃.ငွေကြေးစီးဆင်မှု (Finance Flow)
၄. ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှု( Commercial Flow)တို့ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ကုန်ကြမ်းကနေ ကုန်ချောအထိ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊သယ်ယူပိုဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်၊
Supply Chain အားလုံးမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကရှိပြီး သုံးလည်းသုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်၊ Supply Chain တလျှောက်မှာ အမျိုးမျိုးသော သတင်းအချက်အလက်တွေက ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ Demand Information Flow ၊ Forecsating Information Flow ၊ Production and Scheduling Information Flow ၊ Design and NPI Information flow ဆိုပြီးရှိပါတယ် ။ Information Flow က ထုတ်လုပ်သူနှင့် စားသုံးသူဘက်သို့ နှစ်ဘက်စီးဆင်းလျှက်ရှိပါတယ် ၊
ဒီအချက်က Supply Chian မှာ အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ ၀ယ်ယူသူစားသုံးသူ (Customer)တွေဟာ မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကို အသိချင်ဆုံးပါပဲ ၊ ယခုနောက်ပိုင်းမှာဆို Tracking System အနေနဲ့ ပစ္စည်းတင်မော်တော်ယာဉ်များကို GPS Systemများ တပ်ဆင်ချိတ်ဆက်ကာ ကုန်ပစ္စည်းရွေ့လျားမှုများကို Customer ကိုယ်တိုင် သိရှိနိုင်ပြီး စီမံနိုင်နေပြီဖြစ်ပါသည်၊
ငွေကြေးစီးဆင်မှုကလည်း Supply Chian ရဲ့ Blood Stream လိုတောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြပီဖြစ်ပါတယ်၊ Supplier ဘက်က ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှု (material Flow )ရှိ သလို Customerဘက်က ငွေကြေးစီးဆင်မှု(Finance Flow)ကလည်း ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ တချို့ က Money Flowလို ခေါ်ကြပြန်ပါသေးတယ်၊
၄.ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှု( Commercial Flow)
Supply Chain တစ်ခုလုံးတွင် စီးပွားဖြစ် ကုန်သွယ် စီးဆင်းမှုရှိပါတယ် ၊ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုတစ်လျှောက်တွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တစ်ခု သို့ Supplier မှ Buyer သို့ စီးဆင်မှုများဖြစ်ပြီး ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ ရောင်းခြင်းနှင့် ဝယ်ခြင်းမှ Supplier မှ Buyerဆိုပြီး နောက်ဆုံး end Consumerသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ Commercial flowက ကုမ္ပဏီတစ်ခုထက်ပို့ရပါမယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာ ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုရှိပြီး owner မပြောင်းရင် Commercial flowမဟူတ်ပါဘူး
အဓိကကတော့ Information flowပါ information flowက Both Direction စီးဆင်းပါတယ် ၊ Up streamရော Dowm streamဘက်ရော စီးဆင်းရပါမယ်။ဒါပင်မဲ့ မှန်ကန်သော informationဖြစ်ဖိုရာ လိုပါတယ်။
IMSလိုခေါ်ဆိုနေတဲ့ Information Management Systemတွေဟာ တိုးတက်လာပင်မဲ့..information Shareလုပ်တဲ့သူတွေက မှန်ကန်တိကျတဲ့ information နှင့် Direction က တိကျဖို့လိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အများစုမှာတော့ Information Flowကတော့ အဆင်ပြေသလိုတွေ စီးဆင်းနေပါတော့တယ်
Source : AungMoe